မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုတည်ငြိမ်ရေး ပြန်လည်ရရှိအောင် ကူညီရန် တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောကြား - Xinhua News Agency
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုဘဝတည်ငြိမ်ရေး ပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု နှင့် စောနိုင်သမျှဆောလျင်စွာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ လက်တွဲကာ အပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဩဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ဆွန်းကော်ရှန် ၏ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မေးမြန်းချက်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်းဝန်ပင်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆွန်းသည် ဩဂုတ် ၂၁ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ယင်းခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် တို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဝမ်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ပြောကြားရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံသည် “ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်” ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမူဝါဒသည် မြန်မာပြည်သူအားလုံးအပေါ် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဆိုသည် ။ “ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲက အုပ်စုတွေ နဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာ ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နဲ့ တရားဥပဒေမူဘောင်းထဲက စေ့စပ်ဆွေးနွေးရင်း သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ အဖြေကို ရှာဖွေကြဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ် ” ဟု ဝမ်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(ASEAN)၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အာဆီယံနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံက တက်ကြွစွာ အားပေးထောက်ခံကြောင်း နှင့် မလျော်ကန်သော ပြည်ပ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဝမ်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ၊ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းသွားရန် ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ပြောကြားရာတွင် တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေး ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ၊ စီးပွားရေး ပြန်လည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားရေး နှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်များအပေါ် အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံနှင့်အတူ အနီးကပ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်ဟု ဝမ်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
China to work with int’l community to help restore social stability in Myanmar: FM
BEIJING, Aug. 31 (Xinhua) — China will work with the international community to playaconstructive role in Myanmar’s efforts to restore social stability and resume democratic transformation at an early date,aforeign ministry spokesperson said Tuesday.
Spokesperson Wang Wenbin made the remarks when asked to comment on the recent visit of Sun Guoxiang, Special Envoy for Asian Affairs of China’s Ministry of Foreign Affairs, atadaily press briefing.
The Chinese side stated that the two countries are neighbors witha“pawkphaw” friendship. China’s friendship policy toward Myanmar is for all the people of Myanmar. “We hope that all parties and groups in Myanmar will proceed from the long-term interests of the country and people, and seekaproper solution through political dialogue within the constitutional and legal framework,” Wang said.
China actively supports Myanmar’s cooperation with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in implementing the five-point consensus on Myanmar reached by ASEAN, and opposes undue external intervention, Wang said.
China will continue to offer anti-epidemic support to Myanmar, strengthen joint pandemic prevention and control, and safeguard people’s health and safety in the two countries, Wang said.
The Myanmar side stressed its commitment to maintaining stability, combating COVID-19, revitalizing the economy and improving people’s livelihood, and expressed its hope to have close communication and cooperation with China and ASEAN, according to Wang. Enditem
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ဩဂုတ်လတွင် လျှင်မြန်စွာ မြင့်တက်နေ